Xog: CC Sharmaarke oo Muqdisho kala soo dagay dhaqaale lagu badbaadiyo Jawaari - Caasimada Online
Home Warar Xog: CC Sharmaarke oo Muqdisho kala soo dagay dhaqaale lagu badbaadiyo Jawaari
Xog: CC Sharmaarke oo Muqdisho kala soo dagay dhaqaale lagu badbaadiyo Jawaari
Muqdisho (Caasimada Online) – Warar madaxbanaan oo aan ka helnay Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Somalia ayaa sheegaya in magaalada Muqdisho uu dib ugu soo laabtay Ra’isul wasaarihii hore ee Somalia Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke ahna Xildhibaan ka tirsan Golaha Aqalka Sare.
Wararku waxa ay sheegayaan in Xildhibaan Cumar C/rashiid uu dalka ugu soo laabtay sida uu uga qeybqaadan lahaa isgarabtaaga Guddoomiyaha baarlamaanka Somalia Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo ay ku furan tahay mowjado Siyaasadeed.
Cumar C/rashiid, ayaa la sheegay in saacado un kadib imaanshihiisa Somalia ay wada xiriireen Guddoomiye Jawaari, isagoo u ballanqaaday dhaqaale xoogan oo lagu kala furfuraayo culeyska ka heysta dhanka Xildhibaanada, wallow qadiyada lagu heysto Jawaari ay tahay mid aan lagu doorankarin dhaqaale.
Cumar C/rashiid, ayaa dhaqaale xoogan kala imaaday dalka Imaaraadka Carabta taa oo loogu tallo galay in lagu kala daadiyo Mooshinka ay tiradiisa sii kordheyso, waxaana lasoo sheegayaa in Cumar C/rashiid uu wado kulamo kala duwan.
Cumar C/rashiid, ayaa arrintaan waxaa kala shaqeynaaya Xildhibaano garab ku ah, inkastoo Xildhibaanada ugu badan ay cabsi gaara ka muujinayaan in lagu ag sawirro Cumar C/rashiid oo il gaara ay ku heyso dowlada Somalia.
Sidoo kale, wararka aan heleyno ayaa intaa kusii daraaya in Cumar C/rashiid ay wada ballameen Guddoomiye Jawaari oo aan xiligaan ka faruqin kulamo joogta ah, inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn qaabka uu ku dhici doono kulankooda.
Cumar C/rashiid, ayaa waayadan ka caaganaa imaanshiyaha magaalada Muqdisho, tan iyo markii ay dowlada Somalia ka warheshay in isaga iyo C/raxmaan C/shakuur ay wadeen afganbin dhicisoobay oo lala damacsanaa dowlada.
Dhinaca kale, waxaan cadeyn sida uu xaalku noqon doono waxaana xusid mudan in imaanshiyaha Cumar C/rashiid kadib uu Jawaari sheegay inuu jiro Mooshinka, uuna codsanayo in 10 maalmooda gudahooda lagu horgeyo Golaha Shacabka, si xeer hoosaadka loo ilaaliyo, taa oo muujineysa inay soo gaartay lacag.